SINOPED Professional Pharma milina Manufacturers
Ny orinasa dia manana fitaovana fanodinana manokana ho an'ny milina pharmaceutika.
Milina fanomanana akora
Masinina famenoana Capsule Hard&softgel
milina famenoana ranon-javatra
Masinina famenoana vovoka
Miaraka amin'ny fitaovana fanodinana manokana ho an'ny milina fanafody, miaraka amin'ny teknolojia sy dingana farany eo amin'ny tsena, dia miezaka ny ho tsara indrindra izahay.
Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd. izao dia manao R&D sy famokarana centrifuges ao amin'ny Liaoyang Pharmaceutical Machinery Factory, ny orinasam-panjakana voalohany amin'ny famokarana pharmaceutique ao New China. Manana traikefa be dia be izahay, mifantoka amin'ny Fitaovana Pharmacy nandritra ny 50 taona, manompo mpanjifa efa ho an'aliny. Miaraka amin'ny fitaovana fanodinana mandroso natokana ho an'ny milina pharmaceutique, miaraka amin'ny teknolojia sy dingana farany eo amin'ny tsena, dia miezaka ny ho tsara indrindra izahay. Miaraka amin'ny ekipa matihanina misy olona an-jatony, ny maodely fitantanana tonga lafatra dia mahatonga ny ekipa ho matihanina kokoa. Ny fomba fampidirana R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy dia tsy vitan'ny hoe mahafa-po ny mpanjifa, fa mahatonga azy ireo tsy hanahy.
FLG Fluid Bed voaisy tombo-kase Granulation Linkage Production Line
FLG Fluid Bed voaisy tombo-kase Granulation Linkage Production LineFampidirana amin'ny antsipiriany azafady jereo ny manarakahttps://www.alibaba.com/product-detail/China-Pharmaceutical-Fluid-bed-continuous-fluid_60586863855.html?spm=a2747.manage.0.0.149c71d27MPrngNy tombony amin'ny GEA Pharmaceutical Vertical Continuous Fluid Bed dryer dia mijanona amin'ny fitazonana ny fahamendrehana sy ny fiverimberenan'ny kalitaon'ny vokatra, izay maneho ny fifandanjana tsara eo amin'ny fahombiazan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra. Ao amin'ny dingan'ny fluidization, ny fitaovana dia mitsingevana eny ambonin'ny rivotra, miaraka amin'ny tany mifandray tanteraka amin'ny rivotra mafana, ary noho izany dia mihinana ny fitaovana ary tonga any amin'ny fanjakana tsara indrindra amin'ny fifanakalozana hafanana mba hananana fahombiazana ambony. Namboarina tamin'ny rafitra famafazana araka ny tokony ho izy ary tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ara-drafitra bebe kokoa, ny fandriam-pahalemana dia lasa toeram-pikarakarana zavatra maro amin'ny fiasa mitambatra amin'ny fanamainana, fametahana, fametahana vahaolana, ary fametahana vovoka.
ZPW Series Tablet Press dia endrika manokana ho an'ny Effrvescent Tablet, tsindrio ny granule amin'ny takelaka effervescent mivantana. Karazana totohondry, aorian'ny Quenching&Ny fanodinana manokana, dia afaka misoroka ny Powder Stick to Punches amin'ny fomba mahomby.Izy io dia manana fiantraikany tsara kokoa amin'ny fitaovana dia viscosity, mikoriana ratsy kokoa, mora ny hamandoana, mampiasa fomba manokana de-moulding, be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fivarotam-panafody.
Ny milina famenoana kapsula dia fihetsiketsehana miverimberina sy karazana takelaka lavaka mameno fitaovana famenoana kapsule mandeha ho azy. Izy io dia mampiasa ny famolavolana optimization natambatra ny toetran'ny fanafody sinoa sy ny fepetra takian'ny GMP, manana ny toetran'ny mekanika compact, ny volume kely, ny tabataba ambany, ny famenoana famenoana mazava tsara, ny fiasa maro, ny mihazakazaka stably sns. : famahanana kapsily, fisarahana kapsily, famenoana vovoka, fandavana kapila, fanidiana kapila, fandroahana kapsily vita ary fanadiovana mody sns. mekanika fanandratana izay mora diovina, mitsitsy ny vidiny sy ny mpiasa ho an'ny orinasa mila vokatra
Masinina Gel Encapsulation namboarina namboarina avy any Shina | Sinoped
HSR-180H / 200H / 250H / 300H andian-dahatsoratra softgel tsipika famokarana faobe sy ny mpanjifa mety amin'ny fahaiza-manao samy hafa fepetra takiana. Mety amin'ny sakafo, pharmaceutique, kosmetika, paintball ary indostrian'ny simika.
milina famonosana blister sy sariitatra
JDZ-260 mitohy-karazana milina cartonning haingam-pandeha dia vao noforonin'ny orinasanay, ary mahafeno ny fenitra GMP. Misy endri-javatra amin'ny fahaiza-manao avo lenta, fananana maharitra ary fahaiza-manao avo lenta, sns. Teknolojia maro, anisan'izany ny fametahana automatique an'ny trakta.& Ny fampitaovana, ny fanamboarana boaty ary ny vondrona fanosehana lahatsoratra, sns. dia mihaona amin'ny Eoropeana& Fenitra amerikana. Miaraka amin'ny endrika madio sy ny rafitra fanosehana mitohy, dia mety ny miasa sy mikolokolo. Miaraka amin'ny fihodinan'ny 4-fanodinana kodiaran-droa ivelany, ny boaty dia azo sokafana, ary misy fitaovana in-droa mialoha, noho izany dia azo antoka fa azo tohanana tanteraka ny boaty.Amin'ity milina ity, ny fanaraha-maso mekanika / optika / elektrika / pneumatic dia tafiditra ao anatin'ny iray, ary rehefa mifandray amin'ny milina mifanentana hafa, dia tsipika feno fonosana.
Orinasa milina famenoana kitapo feno rano mandeha ho azy - SINOPED
milina famenoana rano mandeha ho azymisy paompy famenoana ranon-javatra, fanamboarana kitapo, famehezana ary fanontana datyfonosana haingana 30 hatramin'ny 50bags / minDelivery fotoana 25 androLaharana modely 320, 420, 520, 620 ary 720Sakan'ny kitapo 15cm hatramin'ny 35cm
SGGZ-8 2 Loha Capping Famenoana Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic Screw Cap Famenoana ary Machine Capping
* Ity milina famenoana am-bava ity dia ampiasaina indrindra amin'ny tavoahangy fitaratra 20/30/50/60/100ml, famenoana satroka kofehy metaly, ampio satroka, fametahana (horonan-taratasy);* Ity rafitra famenoana milina andiany ity sy rafitra fametahana (roll) dia misy endrika mibaribary sy mibaribary, mameno avo lenta, tsy misy mitete;* Ny firafitry ny capping (roll) dia ny struc patanty ny orinasanayProfessional SGGZ-8 2 Heads Capping Filling Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic Screw Cap Famenoana ary mpanamboatra milina Capping, raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy eny an-tsena, dia manana tombony miavaka tsy manam-paharoa amin'ny lafiny fampisehoana, kalitao, bika, sns. laza tsara eny an-tsena.Sinoped dia mamintina ny lesoka amin'ny vokatra taloha, ary manatsara azy ireo hatrany. Ny fanondroana ny Professional SGGZ-8 2 Heads Capping Filling Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic Screw Cap Famenoana ary mpanamboatra milina Capping dia azo namboarina araka ny filanao.ture, capping(horonan-taratasy) milamina Miantoka tsara ny kalitaon'ny fonosana.
Efitrano madio namboarina 1 mpanamboatra avy any Shina
Efitrano madio tanteraka ity fanorenana ity araka ny fangatahana GMP. Tetikasa turnkey. Ny Efitrano madio na efitra madio dia tontolo iainana, matetika ampiasaina amin'ny famokarana na fikarohana siantifika, izay manana haavo ambany amin'ny loton'ny tontolo iainana toy ny vovoka, mikraoba entin'ny rivotra, potika aerosol ary etona simika. Ny marimarina kokoa, ny efitrano fanadiovana dia manana haavon'ny fandotoana voafehy izay voafaritry ny isan'ny potiny isaky ny metatra toratelo amin'ny haben'ny potiny voafaritra. Mba hanomezana fomba fijery, ny rivotra ambient any ivelany amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe mahazatra dia misy potikely 35.000.000 isaky ny metatra toratelo amin'ny haben'ny 0.5um ary lehibe kokoa amin'ny savaivony, mifanaraka amin'ny efitrano fanadiovana ISO9, raha ny efitrano fanadiovana ISO1 dia tsy mamela poti amin'io habeny io ary 12 ihany. poti isaky ny metatra toratelo ny 0.3um sy kely kokoa
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nahavita zava-bita lehibe izahay noho ny crédit tsara sy ny serivisy. Nanangana fifandraisana ara-barotra maharitra amin'ny mpanjifa maro izahay ary ny sasany amin'ireo mpanjifanay any ampitan-dranomasina dia nanendry anay ho masoivoho mpividy mpanamboatra fanafody.& orinasa mpamokatra fanafody any Shina. Ny vokatra famokarana fanafody dia aondrana any amin'ny faritra maro, toa an'i Korea, India, Indonezia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japon, Danemark, Romania, Bolgaria, Rosia, Afrika Atsimo, Nizeria, Etazonia, Aostralia, Kanada, Arzantina ary Chile. Ankoatra ny milina sy ny fitaovana, dia manome tsipika famokarana, mamadika tetikasa lehibe sy ny fahalalana-ny fomba.
Turnket Project Capsule Tablet Factory any Kambodza
Tetikasa Turnkey ho an'ny Capsule sy Tablet, ahitana efitrano madio, fikarakarana rano ary famokarana herinaratravita tamin'ny 2020 izahay ary vita tamin'ny 2021Ny SINOPED dia manome Famolavolana, famatsiana fitaovana (fanodinana takelaka, famenoana kapsula, fonosana blister, fampifangaroana, famolahana ranon-javatra, fitsaboana rano, efitrano madio sns)Ankehitriny dia eo ambany famokarana toy ny mahazatra ny orinasatongasoa mitsidika!
Milina famenoana Capsule any Vietnam
Ny fitaovana dia azo ampiasaina hametahana sy hamehezana capsules mafy feno ranon-javatra, sombintsombiny sy vovoka, sns, ka ny vokatra dia azo fehezina foana eo amin'ny dingan'ny famonosana, fitehirizana sy ny fitaterana.Afaka misoroka tsara ny volatilization ny volatiledrugs, mampitombo ny fiainana talantalana ny zava-mahadomelina, mba hanatsarana ny fahamarinan-toerana ny capsules sy ny fiarovana ny zava-mahadomelina. Amin'izay fotoana izay ihany koa, dia koa ny kalitaon'ny vokatra avo lenta ho an'ny orinasa pharmaceutika sy ny vokatra ara-pahasalamana orinasa.
tsipika famokarana takelaka sakafo EU
Efitrano madio tanteraka ity fanorenana ity araka ny fangatahana GMP. Tetikasa Tiorkia.Ny Efitrano madio na efitra madio dia tontolo iainana, matetika ampiasaina amin'ny famokarana na fikarohana siantifika, izay manana haavo ambany amin'ny loton'ny tontolo iainana toy ny vovoka, mikraoba entin'ny rivotra, potika aerosol ary etona simika. Ny marimarina kokoa, ny efitrano fanadiovana dia manana haavon'ny fandotoana voafehy izay voafaritry ny isan'ny potiny isaky ny metatra toratelo amin'ny haben'ny potiny voafaritra. Mba hanomezana fomba fijery, ny rivotra ambient any ivelany ao amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe mahazatra dia misy potikely 35.000.000 isaky ny metatra toratelo amin'ny habeny 0.5um ary lehibe kokoa ny savaivony, mifanaraka amin'ny efitrano fanadiovana ISO9, raha ny efitrano madio ISO1 dia tsy mamela poti amin'io habeny io ary tsy misy afa-tsy. 12 poti isaky ny metatra toratelo ny 0.3um sy kely kokoa.
Ny tombony amin'ny teknolojia FL Food Grade Stevia Sugar Production Line dia ny fitazonana ny fitoniana sy ny fiverimberenan'ny kalitaon'ny vokatra, izay maneho fifandanjana tsara eo amin'ny fahombiazan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra. Ao amin'ny dingan'ny fluidization, ny fitaovana dia mitsingevana eny ambonin'ny rivotra, miaraka amin'ny tany mifandray tanteraka amin'ny rivotra mafana, ary noho izany dia mihinana ny fitaovana ary tonga any amin'ny fanjakana tsara indrindra amin'ny fifanakalozana hafanana mba hananana fahombiazana ambony. Namboarina tamin'ny rafitra famafazana araka ny tokony ho izy ary tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ara-drafitra bebe kokoa, ny fandriam-pahalemana dia lasa toeram-pikarakarana zavatra maro amin'ny fiasa mitambatra amin'ny fanamainana, fametahana, fametahana vahaolana, ary fametahana vovoka.
Mpanamboatra milina Pharma -Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd
Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd. dia orinasa famokarana lehibe miompana amin'ny R&D, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny milina famokarana fanafody, ny matihanina indrindraMpanamboatra milina Pharma any Shina, dia isan-karazany centrifuges, fitaovana isan-karazany centrifuge , fantsona centrifuges, ary ny kapila centrifuges. Orinasa mpanamboatra pharmaceutique manokana amin'ny famokarana sy fanodinana vokatra toy ny centrifuges misy tongotra telo. Ny orinasa dia manana injeniera ambony sy teknisianina matihanina, ary manana rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika. Ny fitaovana vokarina dia mahafeno ny fenitra nasionaly sy indostrialy. Izy io dia manana serivisy matihanina aorian'ny varotra, fametrahana sy debugging vokatra feno, ary fiofanana ara-teknika mba hanomezana fitaovana matihanina sy serivisy matihanina ho an'ny mpampiasa.
Andriamatoa David Hua
Telefaonina: + 8618641923977
Mifandraisa amin'ny Sales ao amin'ny XXXXX